काठमान्डूको कैदी – Wagle Street Journal
Posted byDinesh Wagle	 अक्टोबर 14, 2016 अक्टोबर 14, 2016 Leaveacomment on काठमान्डूको कैदी
थुप्रै महिनाअघि द प्रिजनर अफ काठमान्डू पढ्दा म भेटिने हरेकजसोसँग बडो उत्साहित र उत्तेजित हुँदै यो किताबको उल्लेख गर्थेँ । नेपाली इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण पाटो यो पुस्तकले समेटेको छ । कतिपय धट्नाक्रम नेपाली पाठककालागि नौला छैनन् तर खुबै पठनीय छन् । सरल भाषामा सजीव वर्णन गरिएका छन् एेतिहासिक क्षणहरू । यो पोस्तक भन्दा पहिल्यै हड्सनका’boutमा थाहा नभएको होइन । नेपालका कतिपय एेतिहासिक दस्ताबेज उनले संकलन गरेर बेलायत पुर्याएको कुरा सु्निदै अाएको हो । तर त्यो सबै कसरी गरे विस्तृतमा थाहा पाउँदा म रोमान्चित भएँ । किताबपछि टुङ्गोमा पुगेँ हड्सन नेपाली इतिहासको एउटा कालखन्डको महत्वपूर्ण पात्र रहेछन् । मलाई “प्रिजनर” को प्रस्तुतिकरण सजिलो र सहज लाग्यो ।
पुस्तकको समश्या, मलाई लागेको, यसमा अतीव कम नेपाली स्रोतहरू छन् । कथा पुरै ‘उता’बाट भनिएको छ । त्यो किन भयो, मैले अनुमान मात्र लगाउन सक्छु किनकी, अपसोच, मैले नेपालको इतिहास बताउने किताबहरू खासै पढेको छैन । त्यतिबेलाका घटनाको नेपाली इतिहासकारहरूले यथेष्ट अभिलेख नराखेर पो हो कि ? हड्सनले नेपालका’bout जति सूचना र जानकारी बटुले त्यही ढङ्गमा नेपाली पक्षले उनका’bout जानकारी नराखेकोले पो हो कि ? भीमसेन थापाका’bout हड्सन र उनीभन्दा अघिल्ला ब्रिटिश रेजिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरका टिप्पणी र दृष्टिकोणहरू मलाई रोचक र गजब लागे । पढ्दा साह्रै मज्जा अायो ।
गिरीश गिरीको किताब वीरगन्ज । यस’bout मेरो प्रतिक्रिया पढ्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् ।
पुस्तकमा हड्सन पुरै नायककारूपमा चित्रित छन् जसलाई मैले विनाप्रश्न स्वीकार्न सकिन । लेखक उनीप्रति पुरै नतमस्तक भएजस्तो लाग्छ । हड्सनका कमीकमजोरीहरूलाई पनि सकारात्मकताको घुम्टो अोडाइएको जस्तो भान हुन्छ । यसो पनि हुनसक्छ कि हड्सन साच्चै त्यस्तै असल व्यक्ति थिए । तर त्यस्तो हुन कठिन छ किनकी उनी त्यस्तो हुँदाहुन् त अौपचारिकरूपमा बिहे नगरेकी तर अाफ्ना सन्तानकी अामा अर्थात् अाफ्नी “पत्नी”लाई काठमान्डूमै छाडेर उनी नभाग्दा हुन् स्वदेश । पछि उनी नेपाल नजिकै दार्जिलिङ्गमा बस्दा पनि उनले ती महिलालाई लगेको या लाने प्रयास गरेको मैले देखिन ।
वितेका केही वर्ष हरेकदिन जसो हड्सनको फोटो भित्तामा देखेकाले हो वा हड्सनका २१ अौं शताब्दीका उत्तराधिकारीहरूसँग नजिकरहेर काम गरेकाले हो मलाई पुस्तक पढुन्जेल दुईसय वर्ष अघिका घटना चलचित्रजस्तो अाँखैमा झलझली भए । दुईसय वर्षअघि हड्सनले कसरी काम गर्थे भन्ने थाहा पाउँदा र उनको कार्यालयको अहिलेको स्थितिसँग तुलना गर्दा म रोमान्चित भएँ । एउटा पत्र पठाउनु कुन महाभारत हुन्थ्यो । अहिले इमेल पुरानो र ढिलो भइसक्यो, प्रत्यक्ष अनलाईन सदृश्य कुराकानीका अगाडि ।
त्यतिबेलाका बेलायती प्रतिनिधिको त्यतिबेलाको नेपाली राजनीतिमा हुने प्रभाव’bout थाहा पाउँदा पनि म रोमान्चित भएँ । दूतावासको नेपाल राज्यसँगको सम्बन्धको पनि रमाइलो वर्णन पढ्दा म छक्क परेँ ।
काठमान्डूको कैदी: चार्ल्स एलेनको किताब द प्रजनर अफ काठमान्डू
शीर्षक मलाई बडो कल्पनाशील लाग्यो । काठमान्डूको कैदी । लेखक चार्ल्स एल्लेनले त्यसलाई अर्थ्याएका छन्, सुरूमै, त्यो शाब्दिक हैन लाक्षणिक हो भनेर । काठमान्डूले हड्सनलाई कैद गरेको हैन बरू काल नै त्यस्तै थियो । सहज अाउजाउ थिएन । काठमान्डू अाएपछि बेलायत वा ब्रिटिश इन्डियाको राजधानी कलकत्ता फर्किन ऋतु र स्वास्थ्यमा भरपर्नु पर्थ्यो । त्यतिबेलाको नेपाल सरकार र ब्रिटिश इन्डियाका प्रशासकले हड्सनका गतिविधिमा केही अंकुश लगाएका थिए तर मूलत उनी परिस्थितिका बन्दी थिए । अाफ्नै भाग्यका कैदी थिए । जीवनका २२ वर्ष नेपाल उपत्यकामा सीमित उनी त्यसैमा रमाएका थिए, तब न कलकत्तामा रहेका ब्रिटिश इन्डियाका गभर्नर जनरलले उनलाई काठमान्डूको ब्रिटिश दूतको पदबाट घोक्रयाउँदा पदावधी लम्ब्याउन हड्सनले मरिहत्ते गरेका थिए । विस्मयकर हैन त? अर्को कुरा काठमान्डूका त्यतिबेलाका ब्रिटिश दूत कलकत्तास्थिति ब्रटिश इन्डियाका लन्डननियुक्त उच्च प्रशासकबाट निर्देशित/नियन्त्रित हुन्थे भन्ने थाहा पाउँदा मलाई अचम्मै लाग्यो ।
किताब पढ्दा एउटा कुराले मलाई तोडले हान्यो । दुईसय वर्ष अगाडि नै कलकत्ता कति अघि रहेछ हाम्रो काठमान्डूभन्दा । बाहिरियाहरू अाउँदा नराम्रा कुराहरू ल्याए होलान् तर उनीहरूले विचार र ज्ञान पनि त ल्याए भारतमा । कलकत्तामा त्यतिबेलै फोर्ट विलियम कलेज जस्ता शैक्षिक संरचना स्थापित थिए । कला साहित्य’bout जोडदार अनुसन्धान र विवेचना हुन्थ्यो । त्यो हेरिकन काठमान्डू त ढुङ्गे युगमा थियो भन्ने लाग्यो मलाई । त्यसको झन्डै एक सय ६० वर्षपछि म जन्मिएका नेपाली पहाडहरू झन् कुन हालमा थिए होलान् भनि कल्पिदा म दिक्क भएँ ।
किताब सिध्याउँदा मैले अाफूलाई अलि खिन्न अवस्थामा पाएँ । मुख्यत: हड्सनप्रति सहानुभूत भएको अवस्थामा किताबले मलाई छाड्यो ।
यो किताब मैले फेरि पढ्ने विचार गरेको छु ।
अर्कोपाली म निर्वाण र कहर का’boutमा प्रतिक्रिया दिनेछु ।
Posted byDinesh Wagle अक्टोबर 14, 2016 अक्टोबर 14, 2016 Posted inकिताबट्यागहरु: काठमान्डू,किताब,books